Anton’ny fahazoana aretina tampoka noho io voalohany ny fifaliana be loatra. Rehefa faly na malahelo loatra ny olona iray dia misy olana ny fitempon’ny fo. Ny olona manana olana eo amin’ny fo na manana karazan’aretim-po be dia be na manana olana eo amin’ny tosidra dia matetika tratra. Miakatra tampoka ny tosidra ary misy fiantraikany amin’ny atidoha ka mahatonga AVC. Misy ny AVC “hémoragique” izay mamaky tampoka ny lalandra na koa “histemique” izay mamono tampoka na mamela takaitra. Ny tokony hataon’ny mpijery baolina, ho an’ireo mihinana fanafody dia tsy tsara tapatapahana izy io. Tsy tsara ny mandray zava-pisotro mahamamo ary tsy miaraka amin’ny fanafody ireny. Tandremana ny zavatra tenenina sy fihetsika atao. Raha tsy mahazo na tsy mahazaka miari-tory dia aleo miandry ny fitantaran’ny olona. Lanjao ny sakafo fa mety miteraka aretin-kibo sy an-doha. Tandremo ny sakafo amoron-dalana. Ny tena zavatra tsikaritra koa dia be dia be ny mpitia baolina miandahy miambavy tia manandrana rongony rehefa toy izao, hoy izy, ary lasa mahery setra. Avy eo manao ny tsy fanao. Io no tena iangaviako mba hajanon’izay zatra mpanao azy. Ny tena tsara dia aleo sakafo maivana tsy mialon’andro sy ranomboakazo vita avy amin’ny rano avy nampangotrahana no hanaovana fety rehefa toy izao. Rehefa avy mitsinjaka avy any ivelany iny dia aleo misotro izay rano avy nampangotrahana izay satria mbola handresy 2 sy 1 isika amin’io alakamisy io.